Weerar jidgal ah oo lagu qaaday Ciidamo ka tirsan dowladda & Khasaaro ka dhashay | SMC
Home WARARKA MAANTA Weerar jidgal ah oo lagu qaaday Ciidamo ka tirsan dowladda & Khasaaro...
Weerar jidgal ah oo lagu qaaday Ciidamo ka tirsan dowladda & Khasaaro ka dhashay
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan weerar jidgal ah oo lala beegsaday Ciidamo ka tirsan kuwa Ciidamada dowladda Soomaaliya, xilli ay gelibanayeen Gaadiid dhuxul siday inta u dhaxeysa degmooyinka Walanweyn & Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in gaadiidka oo marayay tuulada doonka oo degmada Afgooye 10km ka xiga dhanka Galbeed ay ku qaadeen weerar jidgal ah, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay Risaala u sheegeen weerarkaas ay ku geeriyoodeen 8 qof oo laba kmaid ah ay ahaayeen Darawaliinta waday Gaadiid kuwa xamuulka qaado ah oo siday dhuxul iyo lixda kale oo ka tirsanaa Ciidamada dowlada oo waday gaadiidka.
Horay ayaa waxaa u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa Al-Shabaab ay ku gubeen Gaadiid dhuxul siday, taas oo keentay in Ciidamada dowladda ay gaadiidka mararka qaar ilaalo ka noqdaan.
Sidoo kale shalay Gelinkii dambe ayaa wadada xiriirisa degaannada leego iyo Yaaq-baro weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa Al-Shabaab ay ku dileen Saddex ruux
Wadaadaan ayaa waxaa horey loogu gubay gadiid farabadan oo dhuxul u soo siday magaalada muqdisho alshabaab ayaana Horey u mabnuucay Dhuxusha, intabadana ciidan ayaa soo gudbiya gaadiidka.
Previous articleDhageyso maareeyaha Garoonka Shaati Gaduud baydhabo oo ka warbixiyey diyaarad cilad ku timid iyo in si kumeel gaar loo hakiyey duulimaadyada rayidka
Next articleWaxaa Degmada Xudur Si Nabad ah ku soo gaarey Gawaarida Saarnaa Raashinkii JBM.